विश्वकपमा अब इङ्ल्याण्डको सम्भावना कति? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौँ, असार ११ । विश्वकप क्रिकेटको बाह्रौं संस्करणका प्रारम्भिक चरणका खेलहरू जारी छन् र जति जति खेल अगाडि बढिराखेका छन् त्यति त्यति नयाँ-नयाँ उलटफेर हुँदैछन् र सेमिफाइनलको सम्भाव्य गणित पनि फेरिँदै छ ।
प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रतियोगिताको प्रबल दाबेदार मानिएको दक्षिण अफ्रिका सबैभन्दा खराब विश्वकप अनुभवका साथ बाहिरिइसकेको छ ।
हुन त उसका दुई खेल अझै बाकी नै छन् तर श्रीलंका र अस्ट्रेलियाविरुद्धका ती खेल उसका लागि अनुभव हासिल गर्न मात्र उपयोगी सिद्ध हुनेछन्। दुवै खेल जिते पनि उसको ७ अंक मात्र पुग्नेछ जुन उसलाई सेमीफाइनलसम्म पुऱ्याउन अपर्याप्त हुनेछ ।
त्यस्तै दुई पटकको विश्व विजेता वेस्टइन्डिजको हालत पनि धेरथोर त्यस्तै छ । अहिले सम्म उसले खेलेका ६ खेलमा एकमात्र जीत हासिल गरेको छ । र, अब बाँकी ३ खेलमा उसले भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानको सामना गर्नु पर्नेछ ।
तीन ओटै खेलमा जीत हासिल गरे पनि उसको सेमिफाइनल यात्रा भने सम्भव देखिन्न । किनभने अंक तालिकाको चौथो स्थानमा संघर्षरत इङ्ल्याण्ड उसका लागि तगारो बनेको छ र यदि कदाचित ऊ आफ्नो चौथो स्थान जोगाइराख्न असफल भयो भने श्रीलंका, पकिस्तान र बंगलादेश चौथो स्थानको दाउ हेरेर बसेका छन् ।
यस विश्वकपको घरेलु टोली र हाल एकदिवसीय क्रिकेटको नम्बर एक टीम इङ्ल्याण्डले यस पटकको विश्वकप पक्कै जित्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो । पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई १०४ रनको फराकिलो अन्तरले हराएको उसलाई ३ जुनमा पाकिस्तानसँग १४ रनको पराजयले स्तब्ध बनाइदियो ।
तर उसले आफ्ना अन्य दुई खेलमा उत्साहजनक जीत हासिल गऱ्यो । वेस्टइन्डिजविरुद्ध ४ विकेटले र अफगानिस्तानविरुद्ध १०४ रनले जीत हासिल गरेपछि हौसिएको उसलाई श्रीलंकाविरुद्धको २० रनको हारले फेरि रक्षात्मक अवस्थामा ल्याइदियो ।
झन् मंगलबार अस्ट्रेलियाविरुद्ध ६४ रनले हार व्यहोरेपछि इङ्ल्याण्डको सेमिफाइनल यात्रामा प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ ।
कस्तो छ विश्वकप चुम्ने सम्भावना?
हुन त विश्लेषकहरू क्रिकेटलाई अनिश्चितताको खेल भन्ने गर्छन् । अहिले अविजित रहेर शीर्षमा रहेको न्युजिल्याण्डले सेमी फाइनल खेल्ने त पक्का जस्तै भइसकेको छ तर फाइनलमा को दुई टीम भिड्ने भन्ने कुराको अनुमान त्यति सहज छैन । जहाँसम्म इङ्ल्याण्डको कुरा गर्ने हो अब उसको सेमीफाइनल सम्भावना गणितीय रूपमा रहेको छ । उसले अब दुई खेल खेल्न बाँकी छन्- ३० जुनमा भारतविरुद्ध र ३ जुलाईमा न्युजिल्याण्डविरुद्ध ।
याे पनि पढ्नुस बंगलादेश प्रिमियर लिगः आज पनि सन्दीपले विकेट लिन सकेनन्
एक किसिमले उसले दुवै खेल निकै दबाबपूर्ण अवस्थामा खेल्नु पर्ने देखिएको छ । जस्तो सुकै दबाब झेल्न सक्ने अनुभवी खेलाडीहरूको उपस्थिति रहे पनि अस्ट्रेलियाविरुद्ध उसका खेलाडीहरूले गरेका गल्तीहरू हेर्दा उसका लागि आगामी दुवै खेल निकै दबाबपूर्ण हुने निश्चित छ ।
न्युजिल्याण्डविरुद्धको खेल पाकिस्तानका लागि निर्णायक हुनेछ ।
उसले सेमी फाइनल पुग्नका लागि ती दुवै खेल जित्नै पर्ने देखिन्छ । तर यदि उसले एक मात्र खेल जित्यो र श्रीलंकाले खेल्न बाँकी ३ खेलमध्ये २ मा जीत हासिल गऱ्यो भने उसको सेमिफाइनल यात्रा फेरी जोखिममा पर्न सक्छ ।
त्यतिमात्र होइन सुरुमा निकै लडखडाएर सम्हालिन थालेको पाकिस्तान समेत उसका अघि चुनौती बन्न सक्छ । पाकिस्तानले ३ खेल खेल्न बाँकी छन् । उसले आज (बुधबार) न्युजिल्याण्डविरुद्ध, २९ जुनमा अफगानिस्तानविरुद्ध र ५ जुलाईमा बंगलादेशविरुद्ध खेल्दैछ । सबै म्याच पाकिस्तानको पक्षमा गएको खण्डमा त्यो पाकिस्तानका लागि जबर्जस्त ‘कम ब्याक’ हुनेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा यदि इङ्ल्याण्डले दुई खेल हार्छ भने उसलाई पाकिस्तानले समेत अंकतालिकामा विस्थापित गर्नसक्नेछ ।
हुन त क्रिकेट जन्मिएकै इङ्ल्याण्डको माटोमा हो । तर एकदिवसीय विश्वकपको कुरा गर्ने हो भने उसले आजसम्म एक पटक पनि विश्वविजेता बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सन १९७९, १९८७ र १९९२ गरेर तीन पटक फाइनल खेलिसकेको इङ्ल्याण्डले क्रमशः वेस्टइन्डिज, अस्ट्रेलिया र पाकिस्तानसामु निरीह हुनु पऱ्यो ।
हुन त यस पाली ऊ विश्वकै सर्वोत्कृष्ट क्रिकेट टीमको रूपमा रहेको छ । त्यसैले उसका प्रशंसकहरू निकै आशावादी पनि देखिएका छन् । तर फाइनलको योजना बुन्नुभन्दा पहिले उसकासामु अंकतालिकामा चौथो स्थान कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चुनौती ठुलो रहेको छ ।
क्रिकेटमा कुनै पनि म्याचको भविष्यवाणी गर्दा केही संयोगहरूबारे पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये एउटा संयोग अहिले इङ्ल्याण्डको विपक्षमा रहेको छ ।
हालसम्म सम्पन्न भएका ११ विश्वकपहरू मध्ये २०११ मा बाहेक कुनै पनि विश्वकप घरेलु टोलीले जित्न सकेको छैन । २०११ मा भारतले जीत हासिल गर्दा त्यो संयोग नमिलेको भएपबी अरू १० शृंखलाहरूमा गैर घरेलु टीमहरूले कप उठाएको इतिहास छ ।
ट्याग्स: #cwc2019, Cricket, england cricket, sandeep lamichhane